Ọrụ 5 nke gam akporo 8.1. Ndị ọrụ amaghị Oreo | Gam akporosis
Gam akporo 8.1. Oreo batara na ndụ anyị na mbido ọnwa nke ọnwa Disemba. Nke a bụ nke mbụ melite na gam akporo Oreo agbanweela kemgbe ọ malitere ahịa. Dị ka ọ dị na mbụ na mmelite, a na-ewebata ọtụtụ ọrụ ọhụụ. Ọ bụ ezie na, n'eziokwu, a na-ahụghị ọrụ ndị a.
Ọ bụ ya mere, ọtụtụ atụmatụ ndị ejirila gam akporo 8.1 bia. Oreo amachaghị maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe ihere bụ ihe ihere, ebe ọ bụ na ụdị sistemụ arụmọrụ a na-ewetara anyị ọrụ na-atọ ụtọ ma bara uru. Yabụ, anyị kwuru ụfọdụ n'ime ndị kasị pụta ìhè.
Ekele maka ọrụ ndị a, a na-emeziwanye akụkụ ndị ewebatalarị gam akporo Oreo. Yabụ na ọ bụ nzụlite ezi uche dị na ya ka ụdị nke sistemụ arụmọrụ malitere n'August gara aga. Ihe ndị a na-enye anyị ohere inweta ọtụtụ ekwentị na gam akporo 8.1. Nkwado. Olee ọrụ ndị ọ bụ?
1 Igwe batrị Bluetooth
2 Mgbochi ngwa ngwa
3 Ọkụ na-echebe
4 Gburugburu di omimi
5 WallpaperColor API
Igwe batrị Bluetooth
Versiondị gam akporo a emesịa weta ihe ọhụụ nke dị adị ogologo oge na ekwentị mkpanaaka nke ụdị ụfọdụ dịka OnePlus. Ugbua Nwere ike ịhụ ọkwa batrị nke ngwaọrụ ejikọrọ na mobile site na Bluetooth. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ole batrị ọkà okwu ma ọ bụ ekweisi hapụrụ, na ngwaọrụ ndị ọzọ. A bara uru ma dị mfe iji ọrụ.
Mgbochi ngwa ngwa
Site Gam akporo 6.0. Marshmallow, enwere usoro nchekwa ike akpọrọ DOZE. Ọ na-akawanye mma ka oge na-aga, ya mere ọ bụ ụzọ dị mma iji chekwaa batrị na ekwentị anyị. Mana, enweghi akụkụ ụfọdụ iji meziwanye. Ihe na emeworị na gam akporo 8.1. Oreo, ebe ndabere ngwa mmachi.
N'ụzọ dị otú a, onye ọrụ nwere ike gbochie ngwa ndị a ka ha na-agba ọsọ mgbe ha anaghị emeghe. Ọrụ dịtụ ntakịrị, mana nke ahụ na-enyere anyị aka ịchekwa batrị n'ụzọ dị mfe.
Ọnwa ndị gagoro aga nsogbu bilitere na ihuenyo Pixel XL 2. Ihe gosipụtara nsogbu ndị ọzọ na OLED panel, nke na-adịkarị ọkụ n'oge oge. Odi ka Google emeela ihe banyere okwu a iwebata usoro nchebe dị iche iche. N'etiti ha na mgbe etinyere ngwa, bọtịnụ igodo na-achapụ.
Emere nke a ka ọ bụrụ ọdịiche dị n'etiti ndabere na bọtịnụ belatara. Ya mere, ọ ga-ekwe omume izere mmetụta ahụ ọkụ na-atụ ụjọ na ụfọdụ. Ruo mgbe ịlaghachi ma ọ bụ ịla n'ụlọ, bọtịnụ ndị a na-achagharị agba ga-anọ n'ụzọ ahụ.
Gburugburu di omimi
Ọbịbịa nke gam akporo 8.1. Oreo gosipụtara ọzọ na Google na-aga n'ụzọ ziri ezi na mkpebi ya. Ugbu a, ebuputala isiokwu di omimi. Ọrụ a na-enye anyị nhọrọ ka ịgbanwee n'etiti a Ọchịchịrị na nhie dị dabere na akwụkwọ ahụaja anyị na-eji. Nke a na-eme na akpaghị aka. Yabụ onye ọrụ agaghị eme ihe ọ bụla gbasara ya.
API ejirila ụdị sistemụ arụmọrụ a pụta ụwa. N'okwu a anyị na-ezo aka na API nke ndị ọrụ ole na ole maara, nke rutere na gam akporo 8.1. Ikuku. Anyị na-ezo aka na WallpaperColor API. Nke a na-enye ohere ndị mmepe na sistemụ arụmọrụ n'onwe ya wepụ isi agba nke akwụkwọ ahụaja. Ka ha nwee ike itinye ya ebe dị iche iche nke interface.
Ka ọ were akụkụ dị iche iche nke interface nwere ike ahaziri nke ngwaọrụ anyị. Dịka ọmụmaatụ, onyinyo mgbe ị na-agbanye menu ma ọ bụ gbanyụọ, n'etiti ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ.
Ka i si hụ, enwere ọrụ ndị amachaghị ọtụtụ ndị ọrụ. Nakwa n'ihi na ha dị nso nso a, mana ọ dị mkpa ka ha mara ibe ha. Ebe ọ bụ na ndị a bụ ọrụ nwere ike ịba ezigbo uru. Yabụ, ọrụ na gam akporo 8.1. Oreo ekwesịghị ịla azụ iji ha ma si otú a nweta ọtụtụ ihe na nsụgharị sistemụ arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Android 8.1 atụmatụ. Oreo amachaghị nke ndị ọrụ
Goodzọ dị mma iji gaa MJNDO
Zaghachi Yengri Gutiérrez
The Huawei Enjoy 7S ga-oru oru zuru ụwa ọnụ dika Huawei P Smart
Kedu ihe kpatara anyị ji ahụ foto nke ndị ọrụ anaghị eso na Instagram?